अनुहारको पोतो कसीर हटाउने ? यस्तो छ उपाय ! | raynewsdaily.com
अनुहारको पोतो कसीर हटाउने ? यस्तो छ उपाय !
Sunday, April 25th, 2021, 3:20 pm
एजेन्सी । अनुहार र नाकको डाँडीमा आएको कालो दागलाई सामान्य भाषामा चाया वा पोतो भन्ने गरिन्छ । यसलाई मेडिकल टर्ममा मेलाज्मा वा कोलाज्मा भनिन्छ । विशेष गरी महिलाहरू गर्भवती भएका बेला यस्तो दाग देखापर्ने भएकाले मेडिकल भाषामा यसलाई कोलाज्मा नाम दिइएको हो । जुन हर्मोनको गडबडीका कारणले हुन्छ भनी सोचिए पनि चायापोतो आउनुमा गर्भवती मात्र कारण नहुने अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ ।
चायापोतो घामको किरणका कारण देखापर्ने पत्ता लागेको छ । छालाको तल्लो सतहमा हुने मेलानोसाइट्स भन्ने कोशिकाले मेलानिन भन्ने तत्त्व उत्पादन गर्छ । मेलानिन घाम तथा अन्य कृत्रिम प्रकाशमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुन्छ । घामको किरण अनुहारमा परेपछि मेलानिन छालाको सतहमा फैलिन थाल्छ । घामले मेलानिनलाई निकै छिटो सक्रिय बनाउँछ ।
धेरै कम मानिसमा मात्र घामको किरणले पनि मेलानिन सक्रिय हुँदैन र चायापोतो देखिँदैन । मेलानिन सक्रिय भएर छालाको सतहमा देखिएको अवस्था नै चायापोतो आएको अवस्था हो । जाडो महिनामा घाममा बढी समय बसिने भएकाले यो मौसममा चायापोतो धेरै देखिन्छ । रक्तअल्पता, हर्मोनको असन्तुलन, गालाबाट बढी पसिना आउनु, गर्भावस्था, अन्य औषधिको साइड इफेक्ट, प्रदूषण आदिका कारणले पनि कालो पोतो हुन सक्छ । महिलालाई इन्ड्रोक्राइनल डिजअर्डर, हाइपोथाइराइडिज्म आदिले समेत कालो पोतोको समस्या देखिन सक्छ ।
तपाईंले आफ्नो अनुहारको छालालाई घामबाट जोगाउनुपर्छ । मेलानिन भन्ने तत्त्व आर्टिफिसियल लाइटबाट पनि उत्तिकै सक्रिय रहने भएकाले बत्ती तथा कम्प्युटरमा काम गर्दा पनि असर गर्ने भएकाले लाइटबाट छालालाई जोगाउने उपाय अपनाउँदा मात्र चायापोतोको समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
यदि ब्युटिपार्लरमा उपचार गराउने हो भने तालिमप्राप्त एवम् अनुभवी ब्युटिसियनद्वारा उपचार गराउनुपर्ने हुन्छ । चाया–पोतो हटाउन फेसियल एकदमै प्रभावकारी हुन्छ । साथै घामबाट डढेर आएको सजिलै निको हुन्छ तर बिरामी र औषधिको साइड इफेक्टका कारण आएको चाया–पोतोको उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ ।
सनब्लकको प्रयोग अनिवार्य
खासगरी चाया–पोतो जाडो महिनामा बढी देखा पर्ने गरेको छ । यो समयमा सनब्लक लगाउनुपर्दैन भन्ने आमबुझाइ छ । त्यसैले धेरैजसोले जाडोमा सनब्लक लगाउँदैनन् । सनब्लक नलगाउँदा छाला डढेर कालो हुन्छ अनि चाया–पोतो देखिन थाल्छ । जाडोमा पनि सनब्लक लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । बाहिर ननस्किए पनि वा घाम नै नलागेको दिन भए पनि सनब्लक क्रिम लगाउन जरुरी छ । गर्मी महिनामा कम्तीमा शीतल छहारीमा त बसेका हुन्छौँ । जाडोको बेला होस् वा गर्मीको बेला, अनि जहाँसुकै बसे पनि सनब्लक लगाउनु राम्रो हो ।
फेसप्याक र फेसवासको प्रयोग
दिनको दुईपटक फेसवास प्रयोग गर्नाले छालाको मृतकोशिका बिस्तारै हट्दै जान्छ । यसका लागि नीम फेसवास प्रयोग गर्नु राम्रो हो । चाया–पोतो हटाउन घरमै विभिन्न प्रकारका फेसप्याक बनाएर लगाउन सकिन्छ । फेसप्याकले दाग, खटिरा, फोहोर र मृतछालासमेत हटाउन मद्दत मिल्छ । तर यसका लागि दक्ष ब्युटिसियनको सहयोग लिनु उपयुक्त हुन्छ । फेस प्याकमा मुसुरोको दाल, श्वेतचन्दन (श्रीखण्ड), रक्तचन्दन, कपुर, बेसार, मञ्जिष्ठाको मिश्रण गरेर घिउकुमारीको लेपमा मिलाई नियमित प्रयोग गर्नाले चाया–पोतो हट्दै जान्छ ।
पाखाबारीमै पाइने वा रोपिएका घ्यूकुमारीको पातभित्र हुने गुदीलाई कालो पोतो, चाया देखिएको भागमा लगाउँदा लाभदायक हुन्छ । घ्यूकुमारीको उपयोग छाला रोगका लागि अत्यन्त प्रभावकारी मानिन्छ । बेसार, चुत्रोको बोक्रा घोटेर लगाउनाले समेत सामान्य कालो पोतो हटाउन मद्दत गर्छ । कसै कसैलाई भने डन्डिफोरसँगै कालो पोतो देखिने समस्या समेत रहने गरेको छ । यस्तो स्थितिमा भने मुलाको बीउ घोटेर लगाउनु राम्रो हुन्छ भने सिमलको काँडा घोटेर लगाउँदा पनि डन्डिफोरसँगै कालो पोतोको समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
घरमै मुसुरो दालको पिठो एक चम्चा, काँक्रोको लेदो, घ्यूकुमारीको रसमा बेसार, रक्तचन्दन, श्वेतचन्दनको धुलो हालेपछि बन्ने सम्मिश्रणमा जायफलको धुलो, केही मात्रामा कपुर, कुमकुम समेत मिलाएर बनाइएको पेस्टबाट उपचार गर्न सकिन्छ । यो पेस्ट दिनहुँ बनाएर अनुहारमा लगाउनुपर्छ । एक पटक पेस्ट लगाएपछि एकरदुई घन्टापछि मात्रै मन तातो पानीले मुख धुनुपर्छ । लेप सुख्खा नभएसम्म धुनु हुँदैन । यसपछि भने अनुहारमा कुमकुमादि तेल लगाउनुपर्ने हुन्छ । यो उपचार न्यूनतम एकदेखि डेढ महिना गरेपछि निको हुन्छ ।
कालो पोतो उपचारका लागि आयुर्वेद विज्ञानमा विभिन्न उपायको वर्णन गरिएको छ । बेसार, मन्जिष्ठा, सेतो चन्दन, खदिर, देवदारु, दारु हरिद्रा सबैलाई बराबर मात्रामा लिई चूर्ण बनाएर कागतीको रस, दही वा गुलाबजलसँग मिसाएर पेस्ट बनाएपछि अनुहारमा लगाउनाले फाइदा पुग्छ ।
यो पेस्ट अनुहारमा लगाएको एक घन्टापछि धुनुपर्छ भने यो उपचार प्रक्रिया एकरडेढ महिनासम्म नियमित जारी राख्नुपर्ने हुन्छ । उपचार प्रक्रिया गरिरहेका बेला अनुहारमा चिल्लो पदार्थको कम उपयोग गर्नुपर्छ ।